डिप्लोमा, प्रमाणपत्र र एसएलसीमा भर्नादर २७.८९ प्रतिशतले बढ्यो
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षाको बजेट ४२ प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीको पहुँचसमेत वृद्धि भएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को बजेट वृद्धि भएपछि डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तह र प्राविधिक एसएलसी तहका कार्यक्रमको भर्ना दर २७.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सरकारले प्राविधिक शिक्षाको बजेट वृद्धि गरेसँगै गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा भर्ना संख्या र प्राविधिक शिक्षालयकोे संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल भर्ना क्षमता ४८ हजार ४ सय ९१ बाट २७.८९ प्रतिशत वृद्धि भएर चालू आवमा ६२ हजार १५ पुगेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सीटीईभीटीको बजेट ३ अर्ब ८४ करोड २५ लाख ११ हजार रुपैयाँबाट ४२.७ प्रतिशत वृद्धि गरेर ५ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख ९७ रुपैया पु¥याएसँगै भर्ना संख्या बढेको देखिन्छ । सीटीईभीटीका उपनिर्देशक प्रमोद आर्चायले बजेट वृद्धिसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने योजनाअनुसार सबै प्रदेशमा ६ हजारका दरले छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
सरकारले विगत ३ वर्षमा डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तह र प्राविधिक एसएलसी तहका कार्यक्रम वृद्धि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ मा आंगिक, साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालय, सामूदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा र निजी शिक्षालय गरेर ६४९ प्राविधिक शैक्षिक संस्था सञ्चालन रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ५९ प्रतिशत वृद्धि भएर ८७७ वटा प्राविधिक शिक्षण संस्था पुगेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा देशभर १९ वटा अांगिक प्राविधिक शिक्षालय रहेकोमा १३६ प्रतिशत वृद्धि भएर चालू आर्थिक वर्षमा ४५ पुगेको छ । यसैगरी सामूदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम ११७ बाट २४९ प्रतिशत वृद्धि भएर ३९७ विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पहँुच वृद्धि भएको छ । हालसम्म ४२ आंगिक शिक्षालयको पहुँच ४२ स्थानीय तहमा पुगेको छ भने २४० साझेदारी शिक्षालयको पहुँच २४० स्थानीय तहमा पुगेको छ । यसैगरी ५ सामुदायिक शिक्षालयको पहुँच ५ वटा स्थानीय तह र ४२९ निजीस्तरबाट सञ्चालित शिक्षालयको पहुँच ८५ स्थानीय तहमा पुगेको छ । यसरी हेर्दा आंगिक, साझेदारी, सामुदायिक र निजी शिक्षालय गरी कुल ८७६ शिक्षालयको पहुँच २९० स्थानीय तहमा पुगेको देखिन्छ । प्रादेशीक रुपमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच हेर्दा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा पहुँच रहेको ३ न. प्रदेश रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश न. २ का ३२ स्थानीय तहमा पहुँच रहेको देखिन्छ । यसमध्ये देशभर डिप्लोमा तहमा प्राविधिक शिक्षालयको संख्या ४५४ र प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको संख्या ४५३ गरी ९८८ पुगेको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने योजना ल्याए पनि समग्र शिक्षा क्षेत्रमा छुटयाउदै आएको बजेटको मध्ये ४.५ प्रतिशत मात्र प्राविधिक शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक श्रम बजारको माग पूरा गर्ने र रोजगारदर वृद्धि गर्ने जनाउदै चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसका लागि बजेट भने न्युन विनियोजन गर्ने गरेका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती देखिएको छ ।
सीटीईभीटीबाट उत्पादित जनशक्तिको रोजगारीको दरलाई हेर्ने हो भने इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र कृर्षि क्षेत्रमा फरक फरक रहेपनि ७३ प्रतिशतभन्दा उच्च छ । सो संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति मध्ये इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा ८२, कृषि क्षेत्रमा ७४ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म सीटीईभीटीले डिप्लोमा तहमा ४३ हजार ७९६, प्राविधिक एसइइ तहमा १ लाख ६४ हजार ५२३, सीप परीक्षण २ लाख ९२ हजार २४३, प्रशिक्षक प्रशिक्षण २७ हजार र व्यावसायिक तालिमबाट ३ लाख जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ ।